Waa kuwan codsiyada macOS ee ah in ay beddelaan iTunes - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Waa kuwan codsiyada macOS ee waa in lagu beddelo iTunes
davis 14 April 2019
Calaamadaha codsiyada la soo jeediyey ee ku yaala goobta iTunes ee kuxiga soo socda ee macOS ayaa la arkay. Si kastaba ha ahaatee, waa in barnaamijku uu ku jiraa hal dhinac oo ka mid ah nidaamka si loogu oggolaado in la iskugu duubo iPodyadii hore iyo iPhones.
iTunes ee kursiga kulul. Barnaamijka Apple wuxuu si dhab ah ugu noolyahay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee foomkiisa. Bilowgii toddobaadkan, oo ah horumariye fiican oo Twitter ah, ayaa shaaca ka qaaday in Apple uu qorsheynayo inuu jabiyo iTunes dhowr arji oo kala duwan, sida waxa ka jira macruufka. Abaalmarintan 10, 9To5Mac waxay xaqiijineysaa wax walba adigoo daabacaya astaanta codsiyada mustaqbalka Podcasts iyo TV oo loogu talagalay macOS 10.15.
Maxay taasi dhacdaa
Abaalmarinta Apple-ga ayaa loo qeybin doonaa afar barnaamij macro: Muusikada, Podcasts, Buugaagta iyo TV-ga (iibsashada iyo kireysashada filimada iyo taxanaha). Illaa iyo hadda, buugaagta dhijitaalka ah oo keliya ayaa lahaa codsi gaar ah oo ku saabsan nidaamka hawlgalka. Podcasts iyo videos waxaa lagu qaybiyey via iTunes.
Sida ugu xiisaha badan ayaa ah sida ay tahay Apple sida qorshaha loo qorsheeyay. Kobciyeyaashu waxay ka caawinayaan Marzipan, nidaamka cusub ee fududeeya gelitaanka barnaamijyada laga bilaabo macris ilaa macOS.
Si kastaba ha ahaatee, Apple wuxuu dooran lahaa inuu sii wado iTunes dhinaca geeska macOS 10.15. Inkastoo inkastoo badankeeda muuqaalkeeda lagu kala qaybiyay codsiyada kale, software-ka dhaxalka ayaa wali loo baahan yahay si loo xakameeyo loona xakameyn karo buugaagta yaryar / iPhones iyo Macsiyada.